Waa sidee saaka xaaladda Baladweyne? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa sidee saaka xaaladda Baladweyne?
Ilaa hadda laamaha ammaanka iyo hay’adaha caafimaadku, ma aysan sheegin tirada dadka rasmiha ah ee ku waxyeelloobay, [Dhimasho iyo dhaawacba], hayeeshee, warbaahinta magaalada, ayaa warineysa in qasaaraha dhimaso sii siyaasay saqdii dhaxe ee xalay.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Xaaladda xarunta Hiiraan ee Baladweyne, ayaa saaka deggan, kadib qaraxyo mataano ah oo xalay gilgilay magaalada, kuwaas oo sababay ugu yaraan dhimashada 20 qof iyo dhaawac intaas ka badan oo ay ku jiraan siyaasiyiin.
Qarax-yadaan oo labaduba ahaa is miidaamin, ayaa mid koobaad ka dhacay gudaha Xerada “Lamagalaay” oo ay deggan yihiin madaxda ugu sarreysa Hirshabeelle, qof isku soo xiray, jaakadda qaraxa, ayaana beegsaday Allaha u naxariistee, Xildhibaan Aamina Maxamed.
Qaraxa labaad, oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay wal-xaha qarxa, ayaa isna ka dhacay Isbitaalka Magaalada iyo Hotel Kaamil, waxaana lagu dhiftay, gaari siday dhaawacyo laga soo saaray Lamagalaay, kaas oo sababay khasaaro ka badan kii hore.
Burbur xooggan ayaa gaaray goobaha qaraxyadu ka dhaceen iyo agagaarkooda, waxaana la soo sheegayaa in qeybo ka mid ah dhismaha Isbitaanka Guud, uu dumay, taas oo sababtay in shaqada la tacaalidda bukaanka aysan saakay sidii loogu tala-galay ku socon.
Muuqaallo laga soo duubay goobaha qaraxyadu ka dhaceen, ayaa muujinaya, burburka dhismayaal waaweyn iyo gawaari fara-badan oo gubtay, ciidamada booliska ayaana sheegay in ay wadaan baadi goobka dad laga yaabo in ay ku hoos jiraan dhismayasha.
Baladweyne, waxaa ku sugan Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Guudlaawe, oo la sheegay inuu la ballaansanaa ANU, Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, oo lala beegsaday qaraxa koobaad, xilli ay u sii socotay xaafiiska Guudlaawe, oo ku yaalla xarunta lagu dhex dilay.